Madaxwaynaha Maamulka Puntland Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa maanta ka qeyb galay shir balaaran oo looga hadlayay xiriirinta hay’addaha iyo bixinta canshuurta oo qaban qaabadiisa iska kaashadeen Wasaaradaha Maaliyada iyo Qorshaynta ee Maamulka Puntland.
Shirkan oo ku qabsoomay xarunta jaamacadda PSU ee magaalada Garowe ayaa lagu casuumay 50 hay’addood oo 44 kamid ah ay yihiin kuwo caalamiga ah ee ka howlgala Gudaha Puntland, halka lixda kalena ay yihiin ururada maxaliga ah.
Wasiirka Maaliyadda dowladda Puntland Shire Xaaji Faarax ayaa shirka ku soo xeerka canshuuraha Puntland oo ay meel mariyeen labada gole ee xukuumada, Wuxuuna cadeeyay dowladda Puntland inay ka go’an tahay hirgalinta sharuucda canshuuraha oo aan dib looga laaban doonin.
“Ma dhacayso in hadda kadib la yiraahdo waxaa isku canshuur ah qof qaata $2.000 iyo qof ku shaqeeya $70. Waxaan dadka ku dhiiri galinaynaa inay nala qaataan qorshahaan cusub ee aan hirgalinay,” ayuu yiri Shirre oo intaas kusii daray inay xafiis cusub ka furidoonaan wasaaradda qorshaynta kaasoo hay’addaha u fudadayn doono arimaha canshuuraha la xiriira.
Madaxwaynaha Puntland Dr.Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo Khudbad dheer ka jeediyay Madasha ayaa sheegay in Waajib tahay bixinta Cashuuraha isagoo ugu baaqay Hay’addaha dalka in sida ugu dhakhsiyaha badan ay u hirgaliyaan inay bixiyaan Canshuurta ku waajibtay.
“Majiro aduunka wadan aan cashuur la bixin hadana dowladanimo ka shaqayso, bilowga iyo dhamaadka Dowladnimadu waa bixinta Cashuuraha” Sidaasi waxaa yiri Madaxwayne Cabdiwali Maxamed Cali Gaas.
“Hadii aan Cashuurta la bixin ma jirayo Nidaam dowliya, amnina ma jirayo dalkuna ma yeelanayo kala dambeyn,sidaa la adligeed waa in la bixiyaa canshuurta “ayuu hadalka Raaciyay Madaxwayne Gaas.
Madaxwaynaha Puntland Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa sidoo kale tilmaamay in Dowladda Waajib ay ku tahay Cashuurta ay dadka ka qaado in sib cad ugu celiso Dalka iyo Dadkaba si horumar wanaagsan loo gaaro.
“Hal suurtagal maahan mana yeelayno in qofka askariga ah ee Dowladda u shaqeeya ee Qaata 70-dolar waa la cashuuraya oo cashuur baa laga qaadaya laakiin nin u shaqeeya Hay’ad oo qaadanaya 2000-dolar lama cashuurayo isku xaquuq bayna noqonayaan mashaqaynayso haday horay idinku hirgashay hada iska ilaawa’’ ayuu yiri Madaxwayne Gaas.
“Inaad tiraahdaan qandaraaska aanu anagu bixino Cashuuri kuma waajibto lagaa akhrisan maayo, kuwa cadaanka ah ee wadanka jooga Cashuurta ay aniga ii diidaan bay wadankooda siinayaan, halkaana dakhligaa ka samaysay kama aadan samayna wadanka aad ka timid waa dhaqaale loogu talagalay Puntland iyo Soomaliya” Sidaasi waxa yiri Madaxwayne Gaas.
Madaxweyne Gaas wuxuuu sheegay hay’addii aan diyaar u ahayn inay canshuurta bixiso waa inay qorshaheeda kula laabato meelihii ay ka timid.